DOWLADA Ruushka iyo Dowlada Shiinaha oo ka horyimid hindise dadban oo Suuriya kusaabsan la soo hordhigay QaraMada Midoowe !!! | kowtharmedia.com
Home WARAR DOWLADA Ruushka iyo Dowlada Shiinaha oo ka horyimid hindise dadban oo Suuriya kusaabsan la soo hordhigay QaraMada Midoowe !!!
DOWLADA Ruushka iyo Dowlada Shiinaha oo ka horyimid hindise dadban oo Suuriya kusaabsan la soo hordhigay QaraMada Midoowe !!!
Ruushka iyo Shiinaha ayaa codka diidmada qayaxan u adeegsaday hindise qabyo ah oo la soo hor dhigay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, kaasoo ku baaqay xabbad-joojin muddo toddoba maalmood ah laga hirgaliyo magaalada Xalab.
Previous PostMadaxweynaha Dalka Gambia ayaa bishaan Gudaheeda waxaa Doorasho Madaxeedka Kaga guuleysay Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Dalkaas waxuuna dhahay "Aniga waxaa ahay Muslim iimaan leh 22 sano kadib xilka Kuugu wareejina!! Next PostTaangiyo iyo Tikniko lagu jabiyay Darbiyadii Difaaca ee Daacish & Magaalada Sirte oo lala wareegay Daawo Muuqaal!!